सरिता पँगेनी तिमिल्सिना। प्रकाशित मिति : २०७४ माघ २२ सोमबार , २,६४६ पटक हेरिएको
पोखरा। प्रदेश ४ को पहिलो सभाको बैठक सोमबार सौहार्दपूर्ण माहोलमा भएको छ। तोकिएकै समयमा सुरु भएको बैठक १ घन्टा ५० मिनेटमा सकिएको थियो । बैठक बिहान ११ बजे सुरु भएर १२ः ५० मा सकिएको थियो ।
बैठकको जनाउ घन्टी बज्नु अघि नै सबै सांसद बैठकस्थलमा प्रवेश गरेका थिए । बाहिरबाट हेर्दा निकै आकर्षक बैठक भवन केही साँगुरो भएका कारण आगन्तुक पाहुना र पत्रकारलाई समेत केही असहज भएको थियो ।
सभामुखको भूमिकामा रहेका ज्येष्ठ सांसद जनकलाल श्रेष्ठले प्रदेश प्रमुखले पठाएको पत्र पढेर सुनाएलगत्तै प्रदेश सभा सञ्चालन अन्तरिक कार्यविधि पारित गरिएको थियो । त्यही कार्यविधिमा टेकेरै बैठक सञ्चालन गरिएको थियो । प्रदेशसभाको बैठकले सभामुखको अनुपस्थितिमा सभा सञ्चालनका लागि सांसदहरु गायत्री गरुुङ, टेक बहादुर घर्ती, धनमाया पोखरेल, मन कुमारी गुरुङ र मित्र कुमारी गुरुङ रहेको अध्यक्ष मण्डल चयन गरेको छ ।
बैठकमा प्रदेश नम्बर ४ मा प्रतिनिधित्व गर्ने ५ दलका ११ जनाले बोलेका थिए । एमालेका ३, कांग्रेसका ३, माओवादी केन्द्रका ३, जनमोर्चा १ र नयाँशक्तिका १ सांसदले भनाइ राखे ।
सोमबार बस्ने प्रदेश ४ को पहिलो सभामा ठूलो पार्टीबाट क्रमश सानो पार्टीलाई बोल्न दिइएको थियो । पार्टीको आकार अनुसार संसदमा बोल्ने वक्ताको समय तोकिएको हो । ठूलो दल एमालेले सबैभन्दा बढी ३० मिनेट पायो । एमालेबाट सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङ र सिर्जना शर्माले संसदमा आफ्नो भनाइ राखे ।
दोस्रो दल कांग्रेसका सांसदलाई बोल्ने समय १७ मिनेट पाए । कांग्रेसबाट कृष्णचन्द्र नेपाली, दोबाटे विक र ललितकला गुरुङ संसदमा भनाइ राखे ।
तेस्रो दल माओवादीले १४ मिनेट बोल्ने समय पायो । माओवादीबाट नेत्र अधिकारी, हरिबहादुर चुमान र गायत्री गुरुङले संसदमा मन्तव्य राखे । साना दल नयाँ शक्ति र जनमोर्चालाई ५-५ मिनेट पाए । नयाँ शक्तिका हरिशरण आचार्य र जनमोर्चाका कृष्ण थापाले संसदमा भनाइ राखेका थिए ।
सभामुख फागुन ३ मा छानिने
प्रदेश नम्बर ४ को संसदमा ६० जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । ३६ जना प्रत्यक्ष र २४ जना समानुपातिकबाट चयन भएका सांसद हुन् । प्रदेश सभामा एमालेको २७, कांग्रेसको १५, माओवादीको १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाको ३, नयाँ शक्तिको २ र एक राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे स्वतन्त्र सांसद छन् ।
प्रदेश प्रमुख कुवँरको घर अगाडि बम भेटियो, सेनाले गर्‍यो डिस्पोज
प्रदेश २ को पहिलो निर्णय बिरुद्धै सर्वोच्चमा रिट, मुख्य न्यायाधिवक्ता झाको नियुक्ति खारेजीको माग
प्रदेशमा नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्त
प्रदेश सरकारका पहिलो निर्णयः ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी.....’ कहाँ के ?
प्रदेश ७ मा मन्त्री र मन्त्रालयको टुंगियो भागबन्डा
प्रदेश ५ को उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिने थारु को हुन् ?
प्रदेश ६ का मुख्यमन्त्री शाहीको पाँच योजना सार्वजनिक
प्रदेश ७ मा माओवादी नेता त्रिलोचनद्वारा मुख्यमन्त्रीमा दावी